Mifanome tanana hahasoa ny vahoaka
Kabary nataon’i Ramatoa Guo Xiaomei, masoivohon’ i Sina tao amin’ ny fiaonambe ny mpanao gazety ny 12 martsa tao Nanisana.
Amin’ity taona 2021 ity, hankalaza ny faha-zato taonan’ ny Antoko Kaominista Sinoa (PCC) isika ary hanomboka ny diabe vaovao mankany amin’ ny fananganana eo amin’ny lafiny rehetra ny firenena sosialista. Nandritra izay zato taona nodiavin’ny PCC izay dia hahafahan’ izao tontolo izao mijery ny nitantanana an’ i Sina. Eto aho dia te-hizara aminareo namana ny dian’ i Sina sy ny Antoko Kaominista Sinoa.
Voalohany, ny nitondrana ny Antoko Kaominista Sinoa dia niainga tamin’ ny safidin’ ny tantara sy ny safidin’ ny vahoaka. Ny PCC dia natsangana tamin’ ny 1921 ary teo amin’ny 50 teo ny mpikambana tao tamin’ izany. Noho ny fiaraha-miasa niaraka tamin’ ny vahoaka dia nahavita niharitra tolona mangidy nandritra ny 28 taona ny PCC ka tonga tamin’ny nahazon’ i Sina fahaleovantena sy nahazon’ ny vahoaka fahalalahana ary nitarika ny fananganana ny Repoblika Entim-bahoakan’ i Sina tamin’ ny 1 oktobra 1949. Nandritra ny 70 taona mahery ny PCC dia niantehitra akaiky tamin’ny vahoaka sinoa hatrany, nampivelatra ny sosialisma hifanaraka kokoa amin’ ny toetsaina sinoa ary nitondra fahombiazana ka niteraka fanambinana sy filaminana. I Sina izay hita ankehitriny dia ilay niala tamin’ ny fahantrana lalina ka tonga laharana faharoa amin’ ireo firenena lehibe ara-toekarena maneran-tany, ilay nandresy ny tsy fahampian’ny sakafo sy ny fitafiana teo amin’ny vahoaka, ka nahatonga ny fisondrotana nanan-tantara. Lasa antoko natanjaka ny PCC ary nitombo mahery ny 91 tapitrisa ny mpikambana tao aminy.
Ny fitantanan’ ny PCC dia nahazo ny fahatokisan’ ny vahoaka izay fototra nihorenan’ ny antoko. Nahatanteraka izany rehetra izany ny PCC dia noho ny tsy fanadinony ny antony nanomboany ny adiny sy ny tanjona dia ny hitondra fanafahana hoan’ ny vahoaka sy ny hanarina azy indray. Ny vahoaka izay nisolony tena sy narovany hatrany ka nahazony fahatokisana lalina sy fanohanana avy aminy. Ny Oniversite Harvard dia nanao fanadiadiana nandritra ny 13 taona, ka nahitana fa ny fahafaham-po sy ny lazan’ ny PCC hoan’ ny vahoaka sinoa dia mihoatra ny 93%, mitana ny laharana voalohany mihoatra ny firenena hafa maneran-tany izany lazany izany.
Faharoa, ny antoko Kaominista sinoa dia mitady lalana izay mametraka ny tombontsoa ny vahoaka ho ambony noho ny zava-drehetra hatrany. Ny PCC dia manaja ny foto-kevitra hampivaotra ny vahoaka, ny fanatsarana ny fari-piainany ary ny fiadanan’ ny vahoaka ao aminy. Ny fampivoharana ny vahoaka dia avy amin’ ny vahoaka ihany ary hoan’ ny vahoaka ihany. Hoan’ny PCC ny fanohanan’ ny vahoaka, ny fifanarahana ary ny fahafaham-po no mason-tsivana handrefesana ny fahombiazana sy ny tsy fahombiazan’ ny asa rehetra.
Tamin’ ny 22 martsa 2019, nandritra ny fitsidian’ny sekretera jeneralin’ ny kaomity foiben’ ny PCC sy ny filoham-pirenena sinoa Xi Jinping tany Italia dia nihaona tamin’ ny filohan’ ny « Chambre des députés du parlement Italien », Roberto Fico, ary nanontany azy ity farany ny amin’ ny fihetseam-pony tamin’ ny fifidianana ho filoham-pirenen’ i Sina. Namaly azy ny filoha Xi hoe: « Firenena lehibe i Sina ary goavana ny asako. Hanompo ny vahoaka tsy misy fitiavan-tena aho ary amin’ ny foko rehetra.” Ity fehezanteny ity “Hanompo ny oloko tsy misy fitiavan-tena sy amin’ ny foko rehetra aho” dia maneo ny fahavononan’ ny mpitondra sinoa ary koa ny fampanantenana nataon’ ny PCC tamin’ny vahoaka sinoa.
Ny ady nandritra ny COVID19 tany Sina. Naherin’ny 39 tapitrisa ny mpikamban’ ny PCC no nanao savalalana sy maodely hoan’ ny mpikambana ao aminy tamin’ ny alalan’ny fanaovana tolona tamin’ ny valanaretina. Tamin’ ny niandoan’ izany dia ny sekretera ny PCC tany Shanghai no nitondra ireo mpikambana nanolotena ireo hiatrika ny valanaretina, hoy izy “Na ny asa mafy indrindra na ny toerana sarotra indrindra dia ny mpikambana ao amin’ ny PCC no tokony handeha voalohany amin’izany, tsy tokony hiadian-kevitra izany”, izany dia ohatra mazava. Ary ity fitenana ity hoe “ ny mpikambanana no mandeha voalohany” dia lasa fomba fitenena fampiasa amin’ ny tambazotra-tserasera any Sina. Ny fitondrana entitrin’ ny PCC, ny fandavan-tenan’ny mpikambana ao aminy sy ny fanohanan’ ny vahoaka no nahatonga an’ i Sina ho anisan’ ny firenena nahafehy ny valanaretina COVID19 sy ny nitomboan’ ny toekareny. Ny taona 2020, nahatratra 2,3 % ny fitomboana ary nihoatra ny 100 000 miliara yuan rmb ny arikarena faobe tao Sina.
Ny taona 2020, nahatratra ny tanjona anafaka amin’ny fahantrana ny vahoaka 98 990 000 i Sina, tanteraka sahady ny fanamby napetraka ho amin’ny folo taona hoavy, teo akaikin’ izay, 70 % ny vahoaka maneran-tany no afaka tamin’ ny fahantrana izay tanjon’ ny Firenena Mikambana ihany koa tao anatin’ ny drafitra fampandrosoana 2030. Tsy afa-misaraka amin’ izany asa fampihenana ny fahantrana ny vahoaka tao Sina izany ny fanoloran-tena sy ny asa mafy nataon’ ireo mpikambana antapitrisa ireo nalefa teny amin’ ny tanàna sahirana. Nandany ny hatanorany tamin’ ny fanatanterahana tanjona tsara izy ireo dia ny fanoloran-tenany hoan’ ny hafa, nanao ny tombontsoa hiraisana ambony noho ny tombontsoa ny tenany ary nametraka izay mahakasika ny olona sahirana ho laharam-pahamehana hatrany. Mahery ny 1.800 ny mpikambana no nilofo mafy hatratra ny tanjona ary mahavariana hatrany izany ohatra navelan’ izy ireo izany.
Fahatelo, ny PCC dia manaja hatrany ny foto-kevitra hampivaotra ny vahoaka ao aminy, izay tsy tombontsoa ho an’ ny vahoaka sinoa ihany fa tombontsoa hoan’ ny vahoakan’ ny firenena hafa manerantany ihany koa. Araka ny filazan’ i Xi Jinping, ny PCC dia antoko politika miasa hoan’ ny tombontsoa ny vahoaka sinoa sy hoan’ ny fampandrosoana ny hafa. Ny soatoavina narahin’ ny antoko dia mampiseo ireo foto-kevitra tokony hotandreman’ ny diplaomasia sinoa. Ny vina hanangana fiarahamonina hiraisana hoan’ny hoavy izay natolotr’ i Xi Jinping dia tsy vitan’ ny fehezan-dalàna ao amin’ ny satan’ny antoko sy ny lalàm-panorenana, fa eo ihany koa ny fitondrana ny diplaomasia sinoa. Antompisian’ ny Antoko PCC ihany koa ny hisian’ ny fandriam-pahalemana maharitra, ny filaminana hoan’ ny rehetra, ny fanambinana, ny fisokafana sy fandraisana ny hafa ary ny tontolo tsara sy madio mba ho fianakaviana iray miaina anaty tontolo mirindra.
Ny fanoloran-tena sy ny asa nataon’ i Sina. Nanana andraikitra lehibe i Sina tao amin’ ny Fikambanambe Iraisam-pirenena mikasika ny krizy ara-bola aziatika tamin’ ny 1997 sy ny krizy ara-bola maneran-tany tamin’ ny 2008. Amin’ny maha firenena lehibe sy mandroso azy, dia tsy nanadino ireo mpiara-miasa aminy mbola eo andalam-pandrosoana i Sina, ka nolotra fanampiana hoan’ ireo firenena mahery ny 160 isa sy fikambanana iraisam-pirenena izy. Nandray anjara mavitrika tao anatin’ ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena i Sina izay miadina amin’ ny valanaretina COVID 19. Nanolotra fanampiana hoan’ ny firenena 150 mahery, fikambanana iraisam-pirenena 9 ary eo ampanomezana vakisiny hoan’ ny firenena 60 isa mila izany koa i Sina ho fanoherana ny valanaretina. Nanapa-kevitra ny hanome vakisy 10 tapitrisa isa ihany koa izy ho fanohanana ny rafitra COVAX hamaliana ny antso vonjimaikan’ ny firenena an-dalam-pandrosoana.
Fahefatra, ny fisian’ ny fiaraha-miasa sino-malagasy dia misy tombontsoa hoan’ ny firenena roa tonta. Nofinofin’ ny tsirairay ny hisian’ny filaminana eo amin’ny fireneny avy. Nandritra ny 49 taona nihorenan’ ny fifandraisana diplaomatika sino-malagasy dia nametraka ambony hatrany ny finamanana madio, fitondrana mitovy ary ny tombontsoa hoan’ny firenena roa tonta. Manoloana ny fiantraikan’ny COVID19 dia afaka niara-niharitra ny fitsapana mafy hatrany ny fiaraha-miasa sino-malagasy, ny toe-java-nisy teo amin’ ny fiaraha-miasa dia tsy nisy fiovana goavana fa mbola niroso kokoa indray aza ho amin’ ny fampandrosoana hoan’ ny Madagasikara. Mampianatra ny fahaleovan-tena fa tsy fiankin-doha amin’ ny hafa i Sina ka tiany asongadina manokana ny fanatsarana ny ara-tsaosialy, ny fahaizana manangana ary fahaizana mizaka-tena. Mamaly ny filan’ny Malagasy amin’ ny fampandrosoana an’ i Madagasikara izany ary mandray anjara tamin’ ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa, ny toekarena ary ny fiarahamonina eto Madagasikara.
Fantatrin’ ny vahoaka sinoa tsara ny fiafiana sy fijaliana mianjady amin’ ny fananganana firenena lehibe sy matanjaka, koa mirary soa hoan’ ny vahoaka Malagasy. Manoana an’ i Madagasikara i Sina amin’ ny ezaka ataony amin’ny fanatanterahana ny fampivoarana ny firenena. Hanoy hiara-hiasa amin’ i Madagasikara i Sina ka hanome lanja ny fanatanterahana izay hita tao amin’ ny “Sommet de Beijing du Forum sur la Coopération sino-africaine” sy ny fananganana ihany koa “La Ceinture et la Route” ary ny “Initiative pour l’ Emergence de Madagascar”, mba hahafahana mitrandraka zava-baovao ary mampivaotra sy manamafy ny fiaraha-miasa eo amin’ ny firenena roa tonta.
Coopération économique et commerciale entre la Chine et Madagascar : ensemble pour contribuer à l'émergence (2021-03-04)
Lutte contre la pauvreté en Chine : Trois mots-clés à retenir (2021-03-02)
La Chine, partenaire fidèle pour l'Émergence durable de Madagascar (2021-02-25)